Qasaaraha dabaylaha Filibiin - BBC Somali - Warar
Qasaaraha dabaylaha Filibiin
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 10 Novermber, 2013, 20:22 GMT 23:22 SGA
Gargaar deg deg ah oo caalami ah ayaa la wadaa si loo badbaadiyo afar milyan oo qof dalka Filibiin oo ay saamaysay dabaylaha Typhoon.
Dabaylaha ayaa waxay ka dhaceen bartaha Filibiin iyagoo loo malaynayo inay ku dhinteen kumanaan kun oo qof, qaar kalena ay ku dhex jiraan burburka.
Dabaylaha ayaa burburiyay dhamaan guryihii ku yaalay magaalooyinka. Diyaaradaha milatariga ayaa qaadaya kooxaha gargaarka degdega iyo gargaarka iyagoo gaynaya meelaha ugu daran ee ay saameeyeen dabaylah.
Dadka ayaa qaadanaya wixii u haray alaabtoodii. Diyaaradaha milatariga ee Maraykanka ayaa iyagana ka qayb galaya gargaarka deg dega.
Midowga Yurub ayaa ku deegday afar milyan oo dollar oo gargaar deg deg loogu fidinayo dadka.
Dadka ayaa guro ka samaysanaya burburkii ka haray guryaha iyagoo ku go'doonsan meelaha ay dabayluhu saameeyeen.
Waxaa wada go'ay isgaarsiintii iyo korantadii, madaxweynaha Filibiin ayaa sheegay in muhiimada ay tahay in la soo celiyo korontada iyo isgaarsiinta.